कार्य बैंक | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! कार्य बैंक | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
Barcrest गरेको कार्य बैंक स्लट ती लागि पूर्ण व्यवहार छ, जो एक5मा अविश्वसनीय बोनस सुविधाहरू गुणस्तर ग्राफिक्स चाहनुहुन्छ×3 संग रील स्लट खेल 20 betlines. कार्य बैंक स्लट यसको पुरानो स्कूल रेट्रो विषय र प्रभावशाली प्रतीक लागि प्रसिद्ध छ. तपाईं पृष्ठभूमि प्रयोग बैंक भल्ट देख्न सक्नुहुन्छ. यो तपाईं मेगा Jackpot जीत मा तोड गर्न आवश्यक गुम्बज छ. कि रोचक छैन?
ग्राफिक्स र प्रतीक:
बनाउने सबै क्रेडिट कार्य बैंक भिडियो बीच यति लोकप्रिय स्लट खेलाडीहरू यो खेल को ग्राफिक्स जान्छ. तपाईं वस्तुतः समयमा पछाडि जानुहोस् र पुरानो जमानाको स्लट मेसिन हेर्न. Barcrest सिद्ध स्लट खेल सिर्जना गर्न आधुनिक भिडियो स्लट सुविधाहरू पुरानो शैली विषय मिश्रण गर्ने प्रयास र यसलाई सफल. यो खेल मा मुख्य प्रतीक Crosses छन्, noughts, ठूलो रातो 7, बार, जोकर र सुनौलो भल्ट. यो जोकर एक जंगली रूपमा खेल्छ र सुनको भल्ट को स्क्याटर प्रतीक हो.
बस स्क्याटर प्रतीक हो कुनै पनि अन्य स्लट खेल रूपमा लागि बन्दूक गर्न चाहते, तपाईं नि: शुल्क spins कमाउन चाहनुहुन्छ भने. खैर, मा नि: शुल्क spins कमाउन कार्य बैंक क्यासिनो स्लट is quite different from other mobile slots. पहिले तपाईं कताई पाङ्ग्रा मा कहीं पाँच छरिन्छ भूमि छ र त्यसपछि खेल कुनै पनि सुनको भल्ट खोल्न तपाईं सोध्नुहुन्छ. तपाईं नि: शुल्क संख्या गुम्बज खोलेर तपाईं कमाएका छन् spins प्राप्त.
ठूलो रातो7यो खेल मा उच्चतम कदर प्रतीक हो. तीन या अधिक 7s अवतरण तपाईं यो खेल मा एक धेरै ठूलो पुरस्कार विजेता मा मदत गर्न सक्छ. तपाईं अवतरण 7s र wilds थप इनामदायी संयोजन सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी, तपाईं wilds साथ प्रतीक तिर्ने उच्च मूल्य भूमि जब तपाईं थप पुरस्कार जित्न.
तपाईं लागि यो खेल मा एक आश्चर्य छ. तपाईं noughts बेकारी प्रतीक हो भन्ने लाग्छ सक्छ, तर तिनीहरूले प्रत्येक स्पिन पछि राखेका छन् भन्दा सुनको Vaults मा बारी र तपाईं थप भत्तों प्रस्ताव.
बिग बैंक गोलो:
ठूला बैंक गोलो खेल्ने कार्य बैंक तपाईं प्राप्त यदि सम्भव छ 25 मुक्त spins. यो तपाईं कुल को 500x तीन यस्तै प्रतीक र खेल पुरस्कार तपाईं छनोट गर्नुपर्ने एक उठाएर राउन्ड छ दाँव रकम.
एक RTP संग 95.16%, यो खेल गर्न तत्पर एक छ. ठूलो बैंक बोनस खेल प्रमुख हाइलाइट छ र सामान्य सुविधाहरू देखि एक सुखद प्रस्थान छ. संग रूपमा 20p खेलाडीहरू रूपमा कम न्यूनतम शर्त गुमाउन धेरै छैन. एक सबै क्लासिक विषय प्रेमीहरूले लागि प्रयास गर्नुपर्छ!